Ch 2 Matiu – 2azụ
Home / Bible / Oziọma Matiu / Ch 2 Matiu
2:1 Ya mere, mgbe a mụrụ Jizọs na Betlehem nke Juda, n'ubọchi nke eze, bú Herod, le, Magus si n'ebe ọwụwa anyanwụ rutere Jerusalem,
2:2 si: "Olee ebe onye amuru eze ndị Juu? N'ihi na anyị hụrụ kpakpando + ya nọ n'ebe ọwụwa anyanwụ, na anyị na-na-na-akpọ isiala nye ya. "
2:3 Ma eze, bú Herod, nụrụ nke a, nsogbu n'obi, na Jerusalem nile ya.
2:4 Na-ezukọta ndị isi niile nke ndị nchụàjà, na ndị odeakwụkwọ nke ndị mmadụ, ọ gakwuuru ya na ha dị ka ebe Kraịst ga-amụ.
2:5 Ha we si ya: "Na Betlehem nke Judia. N'ihi na otú ọ na-e dere site onye amụma:
2:6 'Ma gị, Bethlehem, n'ala Juda, bụ ọlị kasị nta n'etiti ndị ndú Juda. N'ihi na site na ị ga na-aga kwa ka onye ọchịchị nke ga-eduzi ndị m Izrel. ' "
2:7 Herọd wee, na-eji nwayọọ na-akpọ ndị Magus, ịdị uchu ịmụta n'aka ha mgbe kpakpando pụtara n'ihu ha.
2:8 Na-eziga ha Betlehem, o kwuru, sị: "Gaa na ịdị uchu na-ajụ ajụjụ banyere nwa okoro. Na mgbe unu chọtara ya, bịanụ kọọrọ m, nke mere na m, kwa, nwere ike ịbịa, na-asọpụrụ ya. "
2:9 Ma mgbe ha nụrụ ihe eze, ha wee lawa. Ma, le, kpakpando ahụ ha hụrụ na n'ebe ọwụwa anyanwụ n'ihu ha, ọbụna ruo mgbe, bịarutere, ya guzoro n'elu ebe nwa ahụ.
2:10 Mgbe ahụ, ha hụrụ kpakpando ahụ, ha na-gladdened site a nnọọ oké ọṅụ.
2:11 Na-abanye n'ụlọ, ha hụrụ na nwa okoro na nne ya Mary. Ya mere, -ada n'ala, ha adored ya. Na mmalite akụ ha, ha nyere ya onyinye: gold, frankincense, na myrrh.
2:12 Na ọ natara a nzaghachi na-ehi ụra ka ha ghara ịlaghachikwuru Herọd, ha wee laghachi si ụzọ ọzọ ka ha onwe ha na mpaghara.
2:13 Ma mgbe ha jere;, le, ihe mmụọ ozi Jehova pụtara ìhè n'ihu na-ehi ụra ka Joseph, si: "Bilie, na iwere nwa okoro ahụ nne ya, gbaga n'Ijipt. Na-anọgide n'ebe ahụ ruo mgbe m na-agwa gị. N'ihi na ọ ga-eme ka Herod gaje ichọ nwa na-enweghị na-ebibi ya. "
2:14 Na-ebili, ọ kpọọrọ nwa okoro ahụ na nne-Ya n'abali, gawa Ijipt.
2:15 O we nọgide n'ebe ahu, tutu Herod, iji mezuo ihe e kwuru site Jehova site n'ọnụ onye amụma, si: "N'Ijipt, M si kpọpụta nwa m. "
2:16 Herọd wee, ebe obu na a ghọgburu site ndị Magus, bụ iwe nke ukwuu. O wee zipụ igbu ụmụntakịrị nwoke niile nọ na Betlehem, na n'ihe nile ókè-ala, si dị afọ abụọ na n'okpuru, dị ka oge ahụ ọ mụtara site ajụjụ ndị Magus.
2:17 Mgbe ahụ ihe e kwuru site n'ọnụ Jeremaya onye amụma ahụ mezuru, si:
2:18 "A e ji nụ olu na Rema, oké ákwá ma ákwá: Rachel na-eti mkpu ụmụ ya. Na ọ bụ adịghị njikere a ga-kasiri, n'ihi na ha anọkwaghị. "
2:19 Mgbe ahụ, when Herod had passed away, le, an Angel of the Lord appeared in sleep to Joseph in Egypt,
2:20 si: "Bilie, na iwere nwa okoro ahụ nne ya, and go into the land of Israel. For those who were seeking the life of the boy have passed away.”
2:21 Na ebili, he took the boy and his mother, and he went into the land of Israel.
2:22 Mgbe ahụ, hearing that Archelaus reigned in Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. And being warned in sleep, he withdrew into parts of Galilee.
2:23 na bịarutere, he lived in a city which is called Nazareth, in order to fulfill what was spoken through the prophets: “For he shall be called a Nazarene.”